Accueil > Gazetin'ny nosy > Midongy Atsimo: Nandoro tanàna indray ny miaramilan’i Hery Rajaonarimampianina
Midongy Atsimo: Nandoro tanàna indray ny miaramilan’i Hery Rajaonarimampianina
Volana vitsy izay no nametrahan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny miaramila tao Ihosy any amin’ny faritr’i Ihorombe ao amin’ny faritanin’i Fianarantsoa ny BIA (Bataillon inter-arme) izay natao hiady amin’ny dahalo sy hampandry tany. Natao hitandro ny filaminana any amin’ny faritra atsimo iny ity miaramila manokana ity.
Zava-doza nefa no nataon’ireto miaramilan’ny fanjakana ireto tany amin’ny distrikan’ny Midongy Atsimo, ao amin’ny faritra Atsimo Atsinanana ny zoma faha 8 desambra 2017 lasa teo araka ny tatitra sy ny loharanom-baovao azo avy amin’ireo olona any an-toerana sy ny zanaka ampielezana aty Antananarivo.
Tao amin’ny kaominina ambanivohitra Ivondro no nitranga ny fanaparam-pahefana nataon’ny miaramila avy amin’ny BIA. Raha vao hiditra ny tanàna tao Ranomena izy ireo dia nanao tifi-danitra maro tamin’ireo basy marovava nentin’izy ireo. Vokatr’izany dia nandositra ny olona tao an-tanàna rehetra. Nisy nefa ramatoa efa lehibe ihany sy efa mahazoazo taona tsy nety nandositra. Nanaraka azy koa ny vinantony lahy antsoina hoe Jean Pierre araka ny loharanom-baovao ihany. Nohatonin’ireto miaramila ireto izy mianaka ka rehefa avy nampanaoviny izay zavatra tiany, ka notifiriny basy ilay Jean Pierre ka maty. Rehefa vita izany dia lasa ireto miaramila ireto, nefa niverina ihany izy afaka antsasakadiny.
Rehefa maty ilay tovolahy dia nasain’ireto miaramila ireto nampidirina tao an-trano ka nasainy nambenan’ilay ramatoa antitra tao. Tsy vitan’izany fa mbola nodoran’ireto miaramila ireto koa ny trano sasantsasany teo amin’ilay tanàna.
Nandeha nihazo an’ny tanàna antsoina hoe Ankeniheny ireto miaramila BIA ireto rehefa avy nanao izany. Notifiriny tamin’ny tongony indray ny tovovavy iray. Marihina hoy ny mpitantara ary nahazoana ny loharanom-baovao fa mbola nibaby zaza koa ity olona ity. Tsaboina ao amin’ny hôpitaly ao Ivondro amin’izao fotoana izao izy.
Farany dia ny tanànan’i Mahazoarivo no nanaovan’ireto miaramila ireto herisetra indray. Olona fito tao an-tanàna no nokapohin’ireo miaramila ireo. Nandeha hatramin’ny daka sy ny totohondry ary ny fandabodabohana ny lamosin’izy fito lahy. Nisy koa ny fandorana ny tranon’izy ireo tamin’izany ka olona maro no tsy manana na inona na inona intsony. Tsy misy koa ny vary sy ny sakafo hafa rehetra any amin’ity kaominina ity amin’izao fotoana izao. Ao anatin’ny fijaliana tanteraka vokatra ny hetraketraka ny miaramila ao anatin’ny BIA ny mponina ka hatramin’ny akanjo anaovan’izy ireo dia izay antra no manome izany.
Ity indray izany no asan’ny miaramilam-panjakana izay mitovy amin’ny trangan-javatra tany Antsakabary tao amin’ny faritra Sofia iray taona lasa izay.
Nahoana no tsy manaraka ny baikon’ny lehibeny intsony ny miaramila ankehitriny? Zava-doza eo amin’ny firenena izany ka mampiahiahy marina ny fihetsika ny fanjakana satria tsy mahavoafehy ny andraikiny intsony.
Raha ny fitarafana ny raharaha avy aty ivelany dia toa ny fanjakana mihitsy no manao izay tsy hilaminan’ny tany sy ny fitondrana. Fandoroana tranon’olona, fanamparam-pahefana ary fandrobana fananan’olona matetika no heno amin’ny fandehanan’ny miaramila manao fampandrian-tany any ambanivohitra.